Rita, Writing for My Sake!: February 2010
luggage တခုလုံး သူများအတွက်ချည်းပဲ။ ကိုယ့်အဝတ်အစားက ပြီးခါနီးမှ အပေါ်က နည်းနည်း ထည့်သွားရတယ်။ ပြီးတော့ အိတ်တလုံးလည်းပါသေးတယ်။ နှစ်ခုပေါင်း 28 ကီလို။ hand carry ဘာမှမပါ (laptop ကလွဲလို့)။
မပြန်ခင်ညက အင်းလေးမှာ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့။ shirt နဲ့က ဉာဏ်ထွန်း ပေါ့။
သူ့မျက်နှာ လူမြင်မှာ အင်မတန်ကြောက်တာ။ ဒါနဲ့ ခေါင်းဖြတ်ပြီး တင်ပေးလိုက်တယ်။ အေးရော...။
အဲဒီနေ့က ပသျှူးထမင်းကြော်စားပြီး ဗိုက်အောင့်နေသေးတယ်။ (ဒါနဲ့များ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် လမ်းဘေးစာ စားဖို့ကြံသေးတာ။)
အဲဒီမတိုင်ခင် တပတ်ကလည်း အရင်အိမ်က ညီမလေးတွေနဲ့ စားကြတော့ ပသျှူးထမင်းကြော်ပဲ စားတယ်။ ဗိုက်အောင့်တာပဲ။ စပ်လို့။
အဲဒါကို အမှတ်မရှိ မပြန်ခင်တရက်မှာ ထပ်စားတယ်။ တော်သေးတယ်။ ညပဲ ဖြစ်လို့။ မနက်ကျ ပျောက်သွားရော။
စားရင်းတန်းလန်း ပသျှူးကြောင်း ငြင်းကြသေးတယ်။ ရည်းစားနဲ့ စကားပြောမတည့် ဖြစ်တာကို ပြောပြတော့ နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော်ဝမ်းသာနေကြတယ်။ ဟိုက ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတာ သိတော့ ပိုဝမ်းသာကြသေးတယ်။ ဝဋ်လည်တာ ဆိုပြီး...။
အခွင့်ကြုံတာနဲ့ ကိုယ့်ရည်းစားက ကိုယ့်ပြောလိုက်တဲ့စကားကို ပြန်သုံးပြီး နှက်ချင်နေကြသေးတယ်။ သူတို့ပြောတာ ရီရတာနဲ့ စိတ်ဆိုးနေတာတောင် နည်းနည်းပျောက်သွားတယ်။ (အကြောင်းရှာ)
Changi မှာ။ (31st Jan 2010)
လိုက်ပို့တဲ့ သူငယ်ချင်းက စားချင်တာနဲ့ ဝင်စားကြတာ။ Indian Snack တွေ။ ကိုယ်ကတော့ ချိုတာတွေ မကြိုက်ပါဘူး။ Juice ချဉ်ချဉ်တခွက်ပဲ သောက်တယ်။
သူ့ဘာသာ စားတာ။ ကိုယ်မပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာ လက်တဆုတ်စာပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုပြတော့ "ဂျလေဘီက ဂျလေဘီစားတယ်" ဆိုပြီး ဟားနေကြသေးတယ်။
အဲဒီဆိုင်မှာ လေကန်နေမိလို့ အချိန်ကပ်နေမှ အထဲကို အပြေးအလွှားဝင်ရတယ်။
hand carry တွေ scan ဖြတ်တဲ့နေရာရောက်တော့ ကိုယ်နောက်ဆုံးမှတ်တာ... ကိုယ့်နောက်မှ တစ်ယောက်ဝင်လာသေးတယ်။ (တေးသော်...)
Silk Air လေယာဉ် delay ဖြစ်တယ်။ 1:50 PM ထွက်ရမယ့်ဟာ 3:30 PM မှ ထွက်တယ်။ ဒါနဲ့ သူများတွေလည်း ဖုန်းဆက်နေကြတာနဲ့ ကိုယ်လည်း အိမ်ကိုဆက်တယ်။ လိုက်ပို့တဲ့ သူငယ်ချင်း မစု ကို လှမ်းဆက်တယ်။
"ဟဲ့ ငါ ခုထိ မထွက်ရသေးဘူး" ဆိုတော့ သူက လေယာဉ်ပေါ်ကို မတက်ရသေးဘူးထင်ပြီး၊ "နင်တစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တာ ဖြစ်နေဦးမယ်" တဲ့။ (လူများ ခုမှ လေယာဉ်ပျံစီးဖူးတာကျနေတာပဲ။)
သူက လေယာဉ်ဘာဖြစ်တယ်ပြောလဲ မေးတော့... "လေယာဉ်မောင်းမယ့်လူ ခုမှ လိုက်ရှာတုန်း ရှိသေးတယ်တဲ့" လို့ပြန်ပြောပြီး ဟားနေမိသေးတယ်။
နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်း လှမ်းဆက်သေးတယ်။ ရှည်နေပြီမို့ မရေးတော့ဘူး။
အစက ချက်ချင်းရေးဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။ TZA ဖတ်လိုက်မိတာ ရေးချင်သွားတာနဲ့။
ခေါင်းစဉ်ကလည်း အညာထိ ပြန်ဖြစ်တာ ဆိုတော့ အညာကို ရည်ညွှန်းပြီး ပေးဖြစ်သွားတာ။ စင်ကာပူက စထွက်တဲ့အကြောင်းကို စရေးမိတော့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြန်မပြင်တော့ဘူး။
"နေပွင့်တဲ့ အရပ်ဒေသ" ကို သွားတယ် ဆိုတော့ ကိုယ်ခုနေနေတဲ့ နေရာကပဲ "နေမမြင် ရေပြင်ခဲ" တဲ့ နေရာလိုလို ဘာလိုလို...
ခေါင်းစဉ်က "မင်းချစ်သူ" ရဲ့ သီချင်းစာသားပါ။ မြန်မာတပြည်လုံးကို ရည်ညွှန်းထားတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။
Posted by Rita at 2/27/2010 11:46:00 PM9comments Links to this post
လေးဆူဒီပါ သီတာရေမြေ ဆုံးစေတော့လေး
အို ဘယ်မမုန်းပါတော့နိုင် ကပ်လုံးဆုံးတိုင်တိုင်
ကြိုးမည့်နောင်ခါ ကမ္ဘာမြေငယ် မြေ့စေတော့လေ
ကိုးဂုဏ်ရှင့် ဂူတော်မွေ တူမသွေပါစေ မယ်နှင့်သား
လှစ်ကျူးမြွက်ကြား ဝှက်မထား မြတ်ရှင်ပင် တန်ခိုးအား
မခြားသိစေကြောင်း ပန်ထွာတည့် ခဝပ်ညောင်း။
တူပြိုင် ဂူလှိုဏ် စကားသစ္စာတိုင်
သံသာလေ ကမ်းတိုင် တူပြိုင်လေ ကူးမယ်
ချစ်လို့ငယ်မကုန် ဝသုန်ဤမြေ သိကြားစေသက်သေညွှန်း
သုံးလူထွတ်မှန်ကူ မတူလေ ပြိုင်နှုန်းကင်း
ချစ်ခြင်းငယ်ပြိုင် မြစ်မင်းပိုင် အဏ္ဏဝါက ပြန်မသာကဲ
(ဦးပြုံးချို - မဟာဂီတ ပေါင်းချုပ်ကြီး၊ သတ္တမအကြိမ်)
အညာကို ပြန်တုန်းက ကူးရေးလာခဲ့တာ။ ဖေဖေ့စာအုပ်တွေထဲက။
Posted by Rita at 2/27/2010 12:45:00 AM4comments Links to this post
Labels: My Favorite Myanmar Classic Songs, Sharing, Song
ခုတလော သတင်းပြောသူ အသစ်တွေ အကြောင်း စဉ်းစားမိတယ်။
"သတင်းပြောတဲ့ အလုပ်ကလွဲပြီး သူတို့ တခြားရွေးစရာ မရှိတော့တာလား"
အရင်ခေတ်ကတည်းက လုပ်လာတဲ့ လူတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး။
ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ အရင်ခေတ်က အခုခေတ် မဟုတ်လို့ပေါ့။
ပြီးတော့ သူသူကိုယ်ကိုယ် အဟောင်းကို စွန့်ဖို့ခက်မှာပဲလို့ တွေးမိလို့။
အခုမှ ဒီအလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေဟာ...
သူတို့ တန်ဖိုးထားရာတွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့အလုပ် ဖြစ်လို့ ဝင်တာလား ??? ဆိုတာ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘဲ တွေးမိပြန်တယ်။
ကိုယ် ကျောင်းပြီးတဲ့ အချိန်မှာ PSC စာမေးပွဲဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်သလိုပဲ။
ဟင် ဆိုရင် လှည့်မကြည့်တဲ့ လူမျိုးကိုး။
ကိုယ်က အဒေါ်နဲ့အတူ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမှာ နေတဲ့သူဖြစ်တော့ ကျောင်းအပြီး အလုပ်မရခင်တနေ့ သူတို့ GM လား (ဘာလားတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး) အိမ်မှာတွေ့တုန်း ကိုယ် အလုပ်မရသေးတာ သိတော့...
"... ဌာနကြီး (ကိုယ့်အဒေါ်လုပ်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန) တစ်ခုလုံး ရှိတာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်က ဘာလို့ အလုပ်မရရမှာလဲ" ဆိုတယ်။
အနှီပုဂ္ဂိုလ်ကြီး စိတ်လေသွားရအောင် ဘယ်လိုစကားလုံးမျိုး သုံးပြီး ပြောလိုက်နိုင်ခဲ့မလဲ ဆိုတာ မှန်းကြည့်လို့ ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ဟက်ဟက် !
လောကမှာ ကိုယ်က စပြီး သူ့ပေါ် မမှားရပါဘဲ ကိုယ့်ကိုမှ လာထိပါးတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘက်က တင်တင်စီးစီး ပြန်တုံ့ပြန်ရတာလောက် အရသာရှိတာ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ချော်ကုန်လို့ အစက ပြန်တွေးလိုက်ဦးမယ်။
"ကိုယ်ဘာလုပ်နေသလဲ ဆိုတာ ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ ဒီလို ပြောနေရတာကို ကျေနပ်နေလို့လား" ဆိုတာ ခုရက်ပိုင်း အခါခါ တွေးနေမိတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်နဲ့လည်း ဘာမှ မဆိုင်ပါဘဲနဲ့။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလိုင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖြိုးမော် blog မှာ တင်တုန်းကလည်း အဲဒီထဲက ဘီကီနီလို ဒီဇိုင်းမျိုးဝတ်ပြီး ကတဲ့ ကလေးမတွေကြည့်ပြီး အတွေးပေါ်ဖူးတယ်။ သူတို့ အဖေတွေကို မေးကြည့်ချင်လိုက်တာ... သမီးကလေးတွေ အဲလိုဝတ်ပြီး လူကြားထဲကနေတာ ကြည့်ရတဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ လို့။ အဲဒါ ကဲ့ရဲ့ချင်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဝေဖန်ချင်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သိချင်လို့ မေးရုံပါပဲ လို့။
စရေးတော့ ခေါင်းစဉ်ကို "သတင်းပြောသူများ" လို့ပဲ တပ်မလို့။
မဆိုင်တာတွေပါ အစွန်းထွက်ပါသွားလို့ နောက်က ext ထပ်ထည့်လိုက်ရပါတယ်။
"မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု" အကြောင်း ပြောလိုရင်းလည်း မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်က ပေါက္ကံရာမယဉ်ကျေးမှုကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အညာသူစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
သို့သော် ကြိုက်တိုင်းလည်း မဝတ်သူ ဖြစ်ရကား၊ ကိုယ့်ကို လာကြည့်ရင်တော့ အာဆီယံဝတ်စားဆင်ယင်မှုဟု အမည်တပ်လျှင် ရကောင်းရနိုင်သော ဒီဇိုင်းနှင့်သာ တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Posted by Rita at 2/06/2010 08:54:00 PM9comments Links to this post
Me : သီချင်းတွေထဲမှာ မိုး တို့၊ နွယ် တို့၊ ထား တို့ကျ ရှိတယ်နော်။
မေ တို့ ခင် တို့ဆို ပိုတောင်ပေါသေးတယ်။
He : အဲဒီတော့
Me : "မြတ်" ကျတော့ သူတို့ သီချင်းလုပ်မဆိုကြဘူး။
Me : အဲဒီတော့ မင်း ကိုယ့်ကို လွမ်းစရာသီချင်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။
He : စဉ်းစားကြည့်လေ။ မိုး တို့၊ နွယ် တို့၊ ထား တို့ ဆိုတာတွေကသံရှည်လေးတွေနဲ့ သီချင်းလုပ်ဆိုလို့ ကောင်းတာကို... မြတ် ကျတော့ အနုပညာမှ မဆန်ဘဲ။ ဘယ်လိုလုပ် သံစဉ်ထဲထည့်မလဲ။ ပြတ်တောင်းတောင်းနဲ့။
Me : Okay ဒါဖြင့် ကိုယ် Hip Hop သမားတွေကို သီချင်းလုပ်ဆိုခိုင်းမယ်။
Posted by Rita at 2/03/2010 05:18:00 PM5comments Links to this post
Labels: Making Joke, me, မောင်
Posted by Rita at 2/02/2010 11:19:00 AM4comments Links to this post